आजको राशिफल | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २७ असार २०७६, शुक्रबार ०६:३० लेखक नेपाली जनता
आजको लाभांश सञ्चय नहुन सक्छ। सरसापटमा खर्चनुपर्ला। अरूको विषयमा चासो राख्दा व्यर्थैमा दु:ख पाइनेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो रहनेछ। घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय छ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। व्यवसायको सन्दर्भमा यात्रा हुन सक्छ। आँटेका काममा साथीभाइबाट सहयोग मिल्नेछ। आफ्नो मिहिनेतको फाइदा अरूले उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। फाइदा मिले पनि खर्चको मात्रा बढ्नेछ। पछिका लागि गरिएको लगानीले भने फाइदा दिनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले बाधा पुर्याउन सक्छन्। फाइदाका लागि शुभचिन्तकहरूलाई साथ लिएर काममा जुट्नुहोला।
बृष राशी – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Brish)
नयाँ अवसर प्राप्त भए पनि नियमित काममै अलमलिनाले पछि परिनेछ। पहिलेको योजना अनिश्चित बन्नेछ भने नयाँ काममा अन्योल बढ्न सक्छ। रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। आफ्नै प्रयासले अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काममा फाइदा हुनेछ। प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। भौतिक साधन जुट्नाले फाइदा हुने काम सुरु हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू किनारा लाग्नेछन् भने द्वन्द्व र मुद्दामा पनि विजयी भइनेछ। आफ्नो सूचना बाहिरिने सम्भावना भएकाले गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको अवसर जुट्नेछ। तर, स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सचेत रहनुपर्ला।
मिथुन राशी – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Mithun)
समयमा होस नपुग्नाले व्यवहारमा पछि परिएला। बलजफ्तीले बन्न लागेको काम बिग्रन सक्छ। आकस्मिक खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ। छर-छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुपर्ला। मिहिनेत गर्दा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। लक्ष्यअनुसार समयमै काम सम्पादन हुनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। विद्यामा वृत्ति, सहुलियत वा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। सहपाठीहरूलाई उछिन्दै पुरस्कार, प्रशंसा आदि प्राप्त गर्न सकिनेछ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ। पशुपालन र कृषिमा लाभ मिल्नेछ। सन्तानको साथले उत्साह जगाउनेछ। आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदा हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई ध्यान दिनुहोला।
कर्कट राशी – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Karkat)
आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिले गरेका कामबाट आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। फाइदा हेर्दा नाम बिग्रन सक्छ। तापनि, आज अरूलाई दिने नभई भित्र्याउने समय छ। दिएको धनमाल पछि आफैंलाई आवश्यक पर्न सक्छ। पुरानो सम्झौता नवीकरण नगर्दा आफ्नो लाभांश गुम्न सक्छ। परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन नसक्दा काममा पछि परिनेछ। अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा अवश्यै लाभ हुनेछ। चल-अचल धनको उपयोगबाट पनि लाभ उठाउन सफल भइनेछ। भैपरी आउने खर्चले सताउने हुँदा लाभांश सञ्चय भने नहुन सक्छ। पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
सिंह राशी – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo)
विगतका कमजोरी बाहिर आउनाले समस्या पर्ला। अवसर प्राप्त भए पनि आफ्नैले काम बिगार्न सक्छन्। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइने सम्भावना छ। विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। पुरुषार्थी कामले समाजमा स्थापित बनाउनेछ। चुनौती पन्छाएर पनि नयाँ काममा जग बसाउने मौका छ। स्वार्थका लागि साइनो गाँस्नेहरूबाट सजग रहनुपर्ला। बलजफ्ती गर्दा काम बिग्रन सक्छ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोला। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। संघर्षद्वारा सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ। (विश्व घटना)
कन्या राशी – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Kanya)
मिहिनेतले नयाँ जिम्मेवारी दिलाउनेछ। तारिफयोग्य कामको चर्चा हुनेछ। उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। तर अरूका काममा समेत समय खर्चनुपर्ला। सामाजिक उत्तरदायित्व प्राप्त भए पनि आफ्ना काम अवरुद्ध बन्न सक्छन्। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने चिताएको काम सजिलै सम्पादन हुनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ। सहयोगीहरूले हिम्मत दिलाउनेछन्। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। सुखद समाचारले उत्साह जगाउनेछ। परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ। आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्।
तुला राशी – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Tula)
अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। उपलब्धिविहीन काममा समय बित्नेछ। आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउनेछन् भने पहिलेका सहयोगीहरू पछि हट्न सक्छन्। आफ्ना सूचना बाहिरिनाले समस्या आउला। कामना पूर्ण हुनेछ भने रमाइलो जमघटमा सहभागी बन्ने अवसर जुट्न सक्छ। आफन्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। लक्ष्यअनुसार समयमै काम सम्पादन हुनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। काममा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। पहिलेको सफलताले पनि हौसला जगाउनेछ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ। कामप्रति गम्भीर नबन्दा अवसर गुम्न सक्छ। शरीरमा केही कमजोरी तथा आलस्य अनुभूति हुनेछ। बिग्रिएको काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा फाइदा उठाउन सकिनेछ।
बृश्चिक राशी – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Brischik)
कामको चापबाट फुर्सद पाइनेछ। व्यवसायले मनग्गे आम्दानी दिलाउनेछ। रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुर्नेछ। छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुहोला। फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपरे पनि कर्जामार्फत धन जुटाउन सकिनेछ। तत्काल फाइदा लिँदा लाभांश अरूलाई पनि बाँड्नुपर्ला। केही खर्च लागे पनि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। आफ्नो मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्। मन मिल्ने साथी भेटिनुका साथै प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिन सक्छ। गृहस्थी सुखद रहनेछ। विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त होला। तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनेछ। परिवारजनको साथले नयाँ आशा जगाउनेछ। अतिथिका रूपमा मानसम्मान समेत प्राप्त हुनेछ।
धनु राशी – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Dhanu)
अवसरले पछ्याए पनि परिस्थितिवश पछि परिएला। काममा समय दिन नसक्दा लक्ष्य प्राप्ति नहुन सक्छ। प्रतीक्षा गरिएको नतिजा कमजोर रहनेछ। पहिलेको आम्दानी प्राप्त हुनाले उत्साह जाग्नेछ। आवश्यक भौतिक साधन जुट्नाले नयाँ काम थालनी हुनेछ। तर रकम जुटाउँदा ऋणभार बढ्न सक्छ। सरसापटमा पनि केही धन बाहिरिने देखिन्छ। श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हातलागी हुन समय लाग्नेछ। तापनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। अरूको विषयमा चासो लिँदा झमेला बेहोर्नुपर्ला। दिगो कामलाई केही समय पर्खनुपर्ला। पहिलेका सहयोगीहरू पछि हट्नाले कामको चाप बढ्नेछ। बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले काम लिने चेष्टा गर्नुहोला। मिहिनेतले अवसर दिलाउनेछ। समस्याका बीच टाढाको यात्रा हुनेछ।
मकर राशी – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Makar)
अस्वस्थताले आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। अप्रिय समाचारले मन खिन्न बनाउला। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। नोकरी तथा व्यवसायमा फाइदा हुनेछ। भौतिक साधनहरू संग्रह हुनेछन्। तारिफयोग्य कामले धेरैको मन जित्न सकिनेछ। रुचिका विषयमा लगानी बढाउन सकिनेछ। अध्ययनमा पछि परिनेछ भने व्यापारमा सोचेको फाइदा नउठ्ने देखिन्छ। नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उपयुक्त साइत पर्खनुहोला। बलजफ्तीले चुनौती निम्त्याउला। आफ्ना सामानमा अरूले दाबी गर्न सक्छन्। नतिजाका लागि काम दोहोर्याउनुपर्ला।
कुम्भ राशी – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Kumbha)
परिस्थिति आफ्ना लागि अलि प्रतिकूल रहनेछ। हडबड गर्नाले काम बिग्रन सक्छ। बेसुरमा वचन दिने बानीले अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् भने मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। सानो प्रयत्नले धेरैको भलाइ हुन सक्छ। सामाजिक वादविवाद सुल्झाउने जिम्मेवारी आउन सक्छ। चुनौतीहरू पन्छाउँदै चिताएको काम बनाउन सकिनेछ। श्रम परे पनि विशेष उपलब्धि हासिल हुनेछ। भविष्यका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। लगनशीलताले उत्साह जगाउनेछ। नजिकका साथीभाइ टाढिनेछन् भने अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइएला। पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ मिल्नेछ। परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बन्न सक्छ। धेरै फाइदा उठाउन नसकिए पनि सहयोगीहरूको साथ भने पाइनेछ।
मीन राशी – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Min)
परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ। आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। स्वास्थ्यका लागि आहार–विहारमा अलि सजग रहनुपर्नेछ। व्यस्तता बढ्नेछ भने शारीरिक समस्याले कमजोरी अनुभूति हुनेछ। गोप्य सूचना बाहिरिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। लगानी गर्ने काममा हात हाल्नुअघि विचार पुर्याउनुहोला। अनावश्यक अडान लिने बानीले पनि समस्या निम्त्याउनेछ। शुभचिन्तकको सुझावलाई ध्यान दिनुहोला। मौका आए पनि काम थाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। व्यवसायमा बाधा पुग्नेछ भने अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ने देखिन्छ। व्यवसायभन्दा सेवामूलक कामबाट राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। तत्काल ठूलो फाइदा नदेखिएकाले लाभ उठाउन हतार नगर्नुहोला।
नीलो स्टिकर भएको ट्याङ्करको पानी मात्र पिउनयोग्य: राणा
काठमाडौँ । नीलो स्टिकर पाएका ट्याङ्करका पानी मात्र पिउनयोग्य रहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले जनाएको छ । उपत्यकामा…
कञ्चनपुरमा प्रहरी ज्यादतीः समाचार संकलनमा गएका पत्रकार शौचालयमा थुनिए
कञ्चनपुर । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरी संरचना निर्माण गर्ने २० जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी…
अछाम छिरेका तीन भारतीय प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । भारतको छत्तिसगढबाट अछाम प्रवेश गरेका तीन जना भारतीय प्रहरीलाई स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
तीन महिनाअघि भारतबाट…
इन्धनको कृत्रिम मूल्यवृद्धि बिरुद्ध ट्रम्प, भने – तेलको मूल्य स्वीकार्य छैन
संयुक्त राज्य अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेट्रोलको निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक)ले अस्वभाविक तथा कृत्रिमरूपमा मूल्य बढाएको…
रष्ट्र बैंकले एक अर्ब ३० करोड मुद्दती निक्षेपमा राख्ने
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु एक अर्ब ३० करोड ५५ लाख बराबरको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा…
गृहमन्त्रीका भाइ नरेशलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न अदालतकाे आदेश
काठमाडौं । अपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) र संगठित अपराध सम्बन्धी कसूरका आरोपित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का भाइ नरेशलाई थुनामुक्त…
प्रचण्डका घरबेटीको बिजाेक, फोटो नगरकोटका सवारीसाधन र बिजुलीका पोलपोलमा टाँसिए ?
एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा को–को पर्दैछन् ?
कार्यालय सहयोगी कुटपिटको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ
‘राष्ट्रवादी’ ओली कालापानीबारे किन बोल्दैनन् ? : देउवा
डा. केसीले स्थगित गरे अनसन
प्रधानमन्त्रीले कति गर्नुहुन्छ, हेर्नुछ : रामचन्द्र पौडेल
डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह
रामेछापकाे उमाकुण्ड-५ मा नेकपा र कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी
रौतहटको प्रहरी चौकीमा मठियामा विष्फोट
बलेसहित २५ जुवाडेलाई पुनः अदालतमा उपस्थित गराइँदै
बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिद काठमाडौंमा
दुई किलो चाँदीसहित भुटानी नागरिक पक्राउ
डलर साट्न जाँदा १० लाख रुपैयाँ लुटियो
जव मैले उनलाइ पानी पानी हुने गरी गरे 65 views
ससुरा बा ! (कथा) 34 views
म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा) 23 views
‘अघोरी बाबा’की पत्नी पाण्डे पक्राउ 22 views
भाउजुले केही नवोली मेरो हात विस्तारै तारेर आफ्नो छातीमा पुर्याइन् 19 views
यस्तो छ , सेक्स गर्दा छोरा वा छोरी हुने साइत 14 views
‘भारतले सुगौली सन्धि र कुमाउ–गढवालमध्ये एउटा रोजोस्’ 11 views
नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न जापान इच्छुक 10 views
आज मंगलवार गणेशको पुजा गर्नुहाेस । तपाइँकाे आज भाग्य यस्ताे छ हेर्नुहाेस । 8 views